1 Samuel 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 14:1-52
Yonatan daa akokoduru adi wɔ Mikmas (1-14)
Onyankopɔn dii Israel atamfo so nkonim (15-23)
Saul peree ne ho kaa ntam (24-46)
Asraafo no dii mogya kaa nam no ho (32-34)
Saul dii ako; n’abusua ho nsɛm (47-52)
14 Da bi, Saul ba Yonatan+ ka kyerɛɛ ne somfo a okura n’akode no sɛ: “Bra ma yentwa nkɔ Filistifo dɔm a wɔwɔ ɔfã noho no mu.” Nanso wammɔ ne papa amanneɛ. 2 Ná Saul wɔ granate akutu* dua a esi Migron no ase wɔ Gibea+ kurotia, na na mmarima bɛyɛ 600 ka ne ho.+ 3 (Ahiya na na ɔhyɛ asɔfotaade efɔd*+ no. Ná ɔyɛ Yehowa sɔfo Eli+ a na ɔwɔ Silo+ no ba Finehas+ ba Ikabod+ nua Ahitab+ ba.) Asraafo no de, na wonnim sɛ Yonatan afi wɔn mu. 4 Baabi a na Yonatan pɛ sɛ ɔfa twa kɔ Filistifo dɔm so no, na ɔbotan a ɛte sɛ ɛse wɔ ɔfã ha, ɛnna ɔbotan a ɛte sɛ ɛse wɔ ɔfã ha; baako din de Boses, na baako nso din de Sene. 5 Ná abotan no baako a ɛwɔ atifi fam no te sɛ edum, na ani kyerɛ Mikmas, na nea ɛwɔ anaafo fam no ani kyerɛ Geba.+ 6 Yonatan ka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Bra ma yentwa nkɔ momonotofo*+ yi dɔm no mu. Ebia Yehowa bedi ama yɛn, efisɛ ɛnyɛ Yehowa den sɛ ɔbɛfa nnipa pii anaa nnipa kakraa bi so agye nkwa.”+ 7 Ɛnna ne somfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ nea ɛwɔ wo komam biara. Baabiara a wopɛ sɛ wokɔ no, kɔ, na medi w’akyi akɔ baabi a wo koma pɛ biara.” 8 Ɛnna Yonatan kae sɛ: “Yebetwa akɔ mmarima no mu, na yɛayi yɛn ho adi akyerɛ wɔn. 9 Sɛ wɔka kyerɛ yɛn sɛ, ‘Munnyina hɔ nkosi sɛ yɛbɛba abɛto mo!’ a, yebegyina hɔ ara; yɛremforo nkɔ wɔn nkyɛn. 10 Nanso sɛ wɔka sɛ, ‘Momforo mmra na yɛmfa nsi ani!’ a, ɛnde yɛbɛforo akɔ, efisɛ Yehowa de wɔn bɛhyɛ yɛn nsa. Ɛno bɛyɛ sɛnkyerɛnne ama yɛn.”+ 11 Ɛnna wɔn baanu no yii wɔn ho adi kyerɛɛ Filistifo dɔm no. Na Filistifo no kae sɛ: “Monhwɛ sɛ Hebrifo no repuepue fi ntokuru a wokohintaw mu no mu.”+ 12 Ɛnna awɛmfo dɔm no ka kyerɛɛ Yonatan ne ne somfo no sɛ: “Momforo mmra ha, na yɛbɛkyerɛ mo nyansa!”+ Ɛhɔ ara na Yonatan ka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Di m’akyi, na Yehowa de wɔn bɛhyɛ Israel nsa.”+ 13 Na Yonatan de ne nsa ne ne nan foro kɔe, na ne somfo no dii n’akyi, na Yonatan kaa Filistifo no gui wɔ n’anim, na ne somfo no dii n’akyi kunkum wɔn. 14 Nnipa a Yonatan ne ne somfo no dii kan kunkum wɔn wɔ asaase ketewa bi so no,* na wɔbɛyɛ mmarima 20. 15 Ɛnna ehu kaa asraafo a wɔwɔ asoɛe hɔ ne awɛmfo dɔm no nyinaa, na asraafo a na wɔtaa kɔfom nneɛma no mpo,+ ehu kaa wɔn. Asaase wosowee, na Onyankopɔn maa ehu kaa Filistifo no. 16 Saul awɛmfo a wɔwɔ Benyaminfo kurow Gibea+ mu no tee sɛ gyegyeegye bi rekɔ so wɔ asoɛe hɔ nyinaa.+ 17 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ wɔn a wɔka ne ho no sɛ: “Mesrɛ mo, monkan nnipa no na yenhu nea wafi yɛn mu kɔ.” Bere a wɔkan nnipa no, wohui sɛ Yonatan ne ne somfo no nni hɔ. 18 Afei Saul ka kyerɛɛ Ahiya+ sɛ: “Fa nokware Nyankopɔn no Adaka no bra ha!” (Saa bere no,* na nokware Nyankopɔn no Adaka no wɔ Israelfo mu.) 19 Bere a Saul gu so ne ɔsɔfo no rekasa no nyinaa, na dede a ɛrekɔ so wɔ Filistifo asoɛe hɔ no ano reyɛ den. Ɛnna Saul ka kyerɛɛ ɔsɔfo no sɛ: “Gyae.”* 20 Enti Saul ne wɔn a wɔka ne ho no nyinaa boaboaa wɔn ho kɔɔ akono. Bere a wokoduu hɔ no, wohui sɛ Filistifo no mu biara atwe sekan wɔ ne yɔnko so, na na ɛhɔ nyinaa ayɛ bagyabagya. 21 Afei nso, Hebrifo a bere bi wɔkɔɔ Filistifo no afã a na wɔwɔ wɔn asoɛe hɔ no, wɔsan baa Israelfo nkyɛn bɛkaa Saul ne Yonatan ho. 22 Israel mmarima a wokohintaw+ Efraim mmepɔw mu no nyinaa tee sɛ Filistifo no aguan, na wɔn nso tiw wɔn ne wɔn kɔkoe. 23 Ɛda no, Yehowa gyee Israel,+ na wɔkoe ara koduu Bet-Awen.+ 24 Ná Israel mmarima no abrɛbrɛ, efisɛ na Saul agyina asraafo no anim aka ntam sɛ: “Nnome nka ɔbarima biara a ɔrentwɛn nkosi sɛ metua m’atamfo so ka na obedidi* ansa na onwini adwo!” Enti asraafo no mu biara amfa aduan anka n’ano.+ 25 Na asraafo* no nyinaa koduu kwae mu, na na ɛwo wɔ asaase no so. 26 Bere a woduu kwae mu hɔ no, wohui sɛ ɛwo resosɔ, nanso obiara amfa bi anka n’ano, efisɛ na wosuro ntam no. 27 Yonatan de, na ɔntee sɛ ne papa agyina asraafo no anim aka ntam,+ enti ɔteɛɛ poma a ekura no no de ano kaa ɛwokyɛm, na odii, na onyaa ahoɔden.* 28 Ɛnna nkurɔfo no baako kae sɛ: “Wo papa agyina asraafo no anim aka ntam sɛ, ‘Nnome nka obiara a obedidi nnɛ!’+ Ɛno nti na asraafo no abrɛ saa no.” 29 Ɛnna Yonatan kae sɛ: “Me papa de ɔhaw* kɛse aba ɔman yi so. Monhwɛ, ɛwo kakra a mede kaa m’ano mpo ama m’anya ahoɔden.* 30 Nneɛma a asraafo no nya fii wɔn atamfo hɔ wɔ ɔko mu no, sɛ wodii bi nnɛ a,+ anka hwɛ nea ɛbɛba! Anka nkonim a wobedi wɔ Filistifo so no bɛkyɛn eyi mpo.” 31 Saa da no, wokunkum Filistifo fi Mikmas kosii Ayalon,+ na asraafo no brɛe paa. 32 Enti asraafo no tu guu nneɛma a wonya fii ɔko mu no so faa nguan ne anantwi ne anantwi mma kunkum wɔn wɔ hɔ ara, na asraafo no dii mogya no kaa nam no ho.+ 33 Ɛnna wɔbɛka kyerɛɛ Saul sɛ: “Hwɛ! Asraafo no reyɛ bɔne tia Yehowa; wɔredi mogya ka nam no ho.”+ Na ɔkae sɛ: “Moanni nokware. Monka mo ho mpia ɔbo kɛse mmrɛ me.” 34 Saul kae sɛ: “Munkyin nkurɔfo no so, na monka nkyerɛ wɔn sɛ, ‘Obiara mfa ne nantwi ne ne guan mmra me nkyɛn ha, na ommekum no wɔ ha nni, na monnyɛ Yehowa bɔne nnni mogya nnka nam no ho.’”+ Ɛnna asraafo no mu biara de ne nantwi bae anadwo no, na obekum no wɔ hɔ. 35 Na Saul sii afɔremuka maa Yehowa.+ Eyi ne afɔremuka a edi kan a osi maa Yehowa. 36 Akyiri yi, Saul kae sɛ: “Momma yentiw Filistifo no anadwo yi na yɛntow nhyɛ wɔn so nsesaw wɔn nneɛma nkosi sɛ ade bɛkye. Yɛremma onipa baako koraa ntena nkwa mu.” Ɛnna wɔkae sɛ: “Nea eye w’ani so biara, yɛ.” Ɛnna ɔsɔfo no kae sɛ: “Momma yemmisa nokware Nyankopɔn no wɔ ha.”+ 37 Enti Saul bisaa Onyankopɔn sɛ: “Mintiw Filistifo no anaa?+ Wode wɔn bɛhyɛ Israel nsa?” Nanso saa da no, Onyankopɔn amma no mmuae. 38 Ɛnna Saul kae sɛ: “Asraafo no mu atitiriw nyinaa, muntwiw mmɛn ha, na yɛnhwehwɛ bɔne a ɛnnɛ yɛayɛ. 39 Yehowa, Israel Gyefo no te ase yi, sɛ ɛyɛ me ba Yonatan mpo a, ɛsɛ sɛ owu.” Nanso obiara anka hwee. 40 Afei ɔka kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ: “Munnyina ɔfã baako, na me ne me ba Yonatan nso begyina ɔfã baako.” Ɛnna nkurɔfo no ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Nea eye wɔ w’ani so biara, yɛ.” 41 Saul ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “O Israel Nyankopɔn, fa Tumim*+ so ma nokware nna adi!” Enti esii Yonatan ne Saul so, na asraafo no faa wɔn ho dii. 42 Ɛnna Saul kae sɛ: “Mommɔ me ne me ba Yonatan so ntonto.”+ Na ekosii Yonatan so. 43 Afei Saul bisaa Yonatan sɛ: “Ka kyerɛ me, dɛn na woayɛ?” Enti Yonatan kae sɛ: “Mede ɛwo kakra kaa m’ano; ná ɛwɔ poma a ekura me no ano.+ Mini! Momma minwu!” 44 Ɛnna Saul kae sɛ: “Yonatan, sɛ mamma woanwu a, Onyankopɔn ntua me ka na ɔmfa bi nka ho.”+ 45 Nanso asraafo no ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Yonatan a ɔde nkonimdi* kɛse+ abrɛ Israel yi na ɔrebewu? Ɛmpare yɛn! Sɛ́ Yehowa te ase yi, ɛnsɛ sɛ ne ti nwi baako mpo tɔ fam, efisɛ Onyankopɔn na ɔde no ayɛ adwuma nnɛ.”+ Enti asraafo no twitwa gyee Yonatan,* na wanwu. 46 Ɛnna Saul gyaee Filistifo no akyi di, na Filistifo no nso kɔɔ wɔn asaase so. 47 Saul maa n’ahenni timii wɔ Israel, na ɔne n’atamfo nyinaa koe: Moabfo+ ne Ammonfo+ ne Edomfo+ ne Soba+ ahemfo ne Filistifo.+ Na baabiara a ɔkɔe nso, odii nkonim. 48 Ɔde akokoduru koe, na odii Amalekfo+ so nkonim, na ogyee Israel fii nnipabɔnefo a wɔfom nneɛma nsam. 49 Saul mma mmarima ne Yonatan, Yiswi, ne Malki-Sua,+ na ne mma mmea baanu no nso, na wɔfrɛ ɔpanyin no Merab+ na na wɔfrɛ akumaa no Mikal.+ 50 Saul yere din de Ahinoam, na na ɔyɛ Ahimahas ba. Ne sahene nso din de Abner,+ na na ɔyɛ Saul papa nua Ner ba. 51 Saul yɛ Kis+ ba, ɛnna Abiel ba Ner+ nso ba ne Abner. 52 Saul nna nyinaa, ntɔkwaw a emu yɛ den ampa ɔne Filistifo ntam.+ Sɛ Saul hu ɔbarima biara a ne ho yɛ den anaa ɔwɔ akokoduru a, na ɔde no aka ne dɔm ho.+
^ Anaa “asaase a anantwi abien betumi de da koro afuntum no fã.”
^ Nt., “Saa da no.”
^ Nt., “Yi wo nsa.”
^ Nt., “obedi paanoo.”
^ Nt., “asaase.”
^ Nt., “n’ani so daa hɔ.”
^ Nt., “m’ani so ada hɔ.”
^ Nt., “gyee Yonatan nkwa.”